Best PCB Assembly/ Bipụtara Circuit Board Manufacturers | Nkà na ụzụ kacha mma
PCB kacha mma maka FPC, Rigid-flex, MCPCB, PCB ceramic, na mgbakọ PCB.
Bọdụ sekit na-agbanwe agbanwe
Igwe anaghị agbanwe agbanwe (ffc)
PCb siri ike-flex
PCb dị gịrịgịrị
PCB ọla kọpa dị arọ
Oke Tg PCB
PCb otu/okpukpu abụọ
Mgbakọ PCb site na oghere
Mgbakọ eriri USB & waya
Mgbakọ Bga PCb
Mgbakọ PCB LED
Mechanical na Membrane Switch Assembly
Ndị na-emepụta bọọdụ sekit e biri ebi maka mcpcb, seramiiki pcb, pcb ọla kọpa dị arọ, fr4 pcb, pcb dị mkpa, pcb na-agbanwe agbanwe na pcb siri ike.
]Ngwaahịa Board Ebipụtara Teknụzụ kacha mma & Mgbakọ PCB
Nkà na ụzụ kacha mmandị na-emepụta bọọdụ sekit e biri ebi bụ ndị na-eweta ngwọta otu nkwụsị nkekacha mma PCB mgbakọ ọrụ na mgbanwe e biri ebi sekit osisi, metal isi PCB, seramiiki PCB, fr4 PCB, wdg Welcome ase!
Ị maara ihe PCB etching bụ?
]Etching bụ usoro iji mmeghachi omume kemịkalụ ma ọ bụ mmetụta anụ ahụ wepụ ihe.
Nka na ụzụ dị elu
]SMT bụ teknụzụ mgbakọ n'elu (technology arịọnụ elu) (nkebi nke teknụzụ Surface Mounted Technology), nke bụ teknụzụ na usoro kachasị ewu ewu na ụlọ ọrụ mgbakọ elektrọnik.Electronic circuit surface Assembly technology (Surface Mount Technology, SMT), nke a na-akpọ elu elu. ma ọ bụ n'elu arịọnụ technology.Ọ bụ a sekit njikọ technology na instno pin ma ọ bụ mkpụmkpụ ndu elu nzukọ akụrụngwa (SMC / SMD, Chinese mgbawa akụrụngwa) n'elu nke a biri ebi sekit osisi (Printed Circuit Board, PCB) ma ọ bụ n'elu nke ọzọ mkpụrụ. , na welded site ugboro ugboro ịgbado ọkụ ma ọ bụ imikpu ịgbado ọkụ.
8-Layer 4OZ arọ ọla kọpa efere
]Gịnị bụ PCB oké ọla kọpa efere? The oké ọla kọpa efere na-egosipụta na-echere usoro, na ụfọdụ teknuzu ọnụ ụzọ na ọrụ siri ike, na-eri bụkwa dịtụ ọnụ. A na-ejikọta akwa mkpuchi ọla kọpa n'ime oyi akwa nke FR-4. Mgbe ọla kọpa ọkpụrụkpụ bụ 2oz na-agwụ agwụ, ọ na-akọwara dị ka oké ọla kọpa PCB efere.PCB oké ọla kọpa efere nwere nnọọ mma ndọtị arụmọrụ, ọ bụghị nanị site nhazi okpomọkụ, elu mmiri ebe nwere ike iji mgbe oxygen ịfụ, ala okpomọkụ adịghị agbanwe agbanwe. kenkuwa na ndị ọzọ na-ekpo ọkụ baking ịgbado ọkụ ụzọ, nakwa ọkụ mgbochi, gbasaa na-abụghị combustible ihe, oké ọla kọpa PCB ya ọkpụrụkpụ dị iche iche, kpọmkwem ngwa oge dịkwa nnọọ iche.
Igwe mkpuchi anọ nke PCB ọla kọpa 2 OZ sitere na teknụzụ kacha mma na China
]Na PCB proofing, akwa ọla kọpa na-ejikọta n'elu fr-4. Mgbe a na-eme ọkpụrụkpụ ọla kọpa ≥ 2OZ, a na-akọwa ya dị ka nnukwu efere ọla kọpa. Ọkpụrụkpụ ya dị iche, ebe a na-eji ya eme ihe dịkwa nnọọ iche.
Igwe PCB nke 10-layer sitere na teknụzụ kacha mma na China
]Multi-layer circuit board a na-akọwakarị dị ka 10-layer —— 20-layer ma ọ bụ n'elu, nke siri ike karịa omenala multi-layer sekit osisi nhazi, àgwà ya na ntụkwasị obi chọrọ dị elu, tumadi eji na nkwurịta okwu akụrụngwa, elu. -ngwụsị nkesa, eletrọnịkị ahụike, ụgbọ elu, njikwa ụlọ ọrụ, ndị agha na mpaghara ndị ọzọ.
Otu akụkụ gbara ọkpụrụkpụ ihe nkiri seramiiki PCB
]A na-emepụta bọọdụ sekit ihe nkiri siri ike, nke a makwaara dị ka bọọdụ sekit ngwakọ, site na ibipụta ihuenyo na mkpụrụ nke ihe dị iche iche. Mkpụrụ ahụ bụ ihe 96% alumina seramiiki.
]Ọkachamara emeputa na China maka ime oké film seramiiki.PCB ihe nkiri siri ike, seramiiki PCB
Ihe nkiri seramiiki nwere akụkụ okpukpu abụọ
]Ọkachamara emeputa na China maka ime oké film seramiiki.
]Onye nrụpụta PCb kacha mma nwere ọrụ Mgbakọ
Nkekacha mma PCB emeputa na-elekwasị anya na ngwọta otu nkwụsị na bọọdụ sekit e biri ebi naPCB mgbakọ.
Ebe ọ bụ na mmalite, dị ka e biri ebi sekit osisi emeputa na kasị mmaPCB mgbakọ Ọrụ n'Eshia, Teknụzụ kacha mma ewepụtala ịbụ onye mmekọ kacha mma na-aga n'ihu, bọọdụ sekit e biri ebi dị elu, dị ka bọọdụ ọla kọpa dị arọ, PCB ultra-thin, akwa agwakọtara, TG dị elu, HDI, ugboro dị elu (Rogers, Taconic) , impedance achịkwa osisi, Metal Core PCB (MPCB) dị ka Aluminom PCB, ọla kọpa PCB, na seramiiki PCB (conductor ọla kọpa, AgPd, Au, wdg) na na.
Anyịndị na-emepụta bọọdụ sekit e biri ebi nye ọ bụghị naanị PCB& MCPCB n'ichepụta, ma tinyekwara PCB oyiri, Engineering& nhazi usoro, njikwa akụrụngwa& ngwọta ngwọta, PCB n'ime ụlọ mgbakọ& ntinye usoro zuru oke, na teknụzụ dị elu (SMT), mgbakọ ngwaahịa zuru oke& ule.
]Gịnị mere họrọ anyị?
Nkà na ụzụ kacha mmaNdị na-emepụta bọọdụ sekit e biri ebi nwere ahụmịhe karịa afọ 15, na-aza mgbe niile n'ime awa 12, yana ọrụ mgbakọ PCB kacha mma na ọnụahịa dị mma.
]Iwu ịdị mma
Ogo PCB bụ isi ngwaahịa. Ndị injinia niile& dị mkpa ngalaba ụmụ okorobịa nwere ihe karịrị afọ ise nke ahụmahụ na PCB ụlọ ọrụ, anyị na-eso na ndabara PCB ọkọlọtọ, nakwa dị ka ndị ahịa' pụrụ iche arịrịọ.
]Teknụzụ nka nke steeti
Ọtụtụ n'ime anyị engineer na rụọ nwere ihe karịrị afọ iri nke ahụmahụ na PCB ụlọ ọrụ, otú anyị nwere ike na-emepụta pụrụ iche dị ka 20 OZ arọ ọla kọpa osisi, 4 oyi akwa MCPCB, wdg.
Anyị zụtara ọtụtụ igwe ọgbara ọhụrụ nwere nka nke steeti& ngwaọrụ maka nrụpụta PCB, na ịlele, iji melite ogo bọọdụ anyị.
A na-aga n'ihu na-emeziwanye MCPCB anyị, FR4 PCB& FPC& Seramiiki PCB nrụpụta ọkwa iji nweta nsonaazụ na-eju afọ site n'aka ndị ahịa na anyị onwe anyị.
]Ihe gbasara teknụzụ kacha mma ndị na-emepụta bọọdụ sekit ebipụtara
Omenala ebi ebi sekit Board mma nkwa
Best Technology omenala pcb emeputa, guzosie ike na June 28, 2006, bụ a Hong Kong aha ụlọ ọrụ onye lekwasịrị anya na otu nkwụsị ngwọta na-eweta nke FPC, Rigid-flex PCB, MCPCB, FR4 PCB, Ceramic PCB, Pụrụ iche PCB dị ka Elu ọla kọpa ( ruo 20 OZ), PCB dị gịrịgịrị (0.10, 0.15mm), yana ọrụ mgbakọ PCB.
Kemgbe mmalite ya, dị ka onye na-ere sekit sekit (PCB) e biri ebi na Eshia, ewepụtala teknụzụ kacha mma ka ọ bụrụ onye mmekọ PCB gị kacha mma nke bọọdụ sekit e biri ebi dị elu, dị ka bọọdụ ọla kọpa dị arọ, PCB dị mkpa, agwakọta. n'ígwé, elu TG, HDI, elu ugboro (Rogers, Taconic), impedance achịkwa osisi, Metal Core PCB (MPCB) dị ka Aluminom PCB, ọla kọpa PCB, na Ceramic PCB (conductor ọla kọpa, AgPd, Au, wdg) na na.
Anyị na-enye ọ bụghị naanị PCB& MCPCB n'ichepụta mana tinyekwara PCB oyiri, Injinia& nhazi usoro, njikwa akụrụngwa& ngwọta ngwọta, PCB n'ime ụlọ mgbakọ& nchikota sistemu zuru oke, teknụzụ n'elu elu (SMT), na mgbakọ ngwaahịa zuru oke& ule.
]Ndị ọrụ ụlọ ọrụ
]OEM omenala ngwọta
]Okwu bọọdụ sekit ebipụtara omenala
Ịtụkwasị obi mma izute ndị ahịa anyị
Omenala si Australia jiri teknụzụ kacha mma kwurịta ọrụ ya
]Otu n'ime ndị ahịa anyị mara mma, letara ụlọ ọrụ anyị na Eprel 3, 2019.Onye ahịa ahụ kwuru na a na-enwe ekele maka teknụzụ kacha mma dị ka onye na-ebubata ngwaahịa dị mma nke zuru oke chọrọ.Ọ gafere PCB chọrọ nke a ga-achọrọ maka mkpa mmepụta ha ugbu a ma nye anyị atụmatụ ngwaahịa achọrọ maka ọrụ ndị a.
Anyị nwere otu onye ahịa si US nke letara anyị na Julaị 25, 2019
]Anyị nwere otu onye ahịa si US bụ onye letara anyị na July 25, 2019. Ọ gara na ụlọ ọrụ SMT na FPC anyị ma nwee obi ụtọ ịhụ ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ na ogbako doro anya, ngwaahịa nnyefe ngwa ngwa na nkwenye dị mma.
Na Julaị 11, anyị nwere ezigbo onye ahịa si Jamanị letara anyị
]Na Julaị 11, anyị nwere nnukwu onye ahịa si Germany bịara leta anyị n'ụtụtụ a, n'ezie Peter, onye isi njikwa anyị na Tiffany, nwa agbọghọ anyị na-ere ahịa ka gara leta ụlọ ọrụ ya otu ọnwa gara aga na Frankfurt. Oge a onye ahịa gara n'ọfịs anyị, FPC, ụlọ ọrụ SMT wee soro anyị rie nri ehihie na-atọ ụtọ. Ọzọkwa, o nyere anyị ọrụ ndị ọzọ gụnyere seramiiki PCB.Daalụ maka nkwado ya dị ukwuu na anyị ga-arara onwe anyị nye inye ndị ahịa anyị ngwaahịa na ọrụ na-enye afọ ojuju.
]Kpọtụrụ onye na-emepụta PCB kacha mma
Naanị hapụ email gị ma ọ bụ nọmba ekwentị gị n'ụdị kọntaktị ka anyị nwee ike izipu gị ọnụahịa efu maka ụdị atụmatụ anyị dị ukwuu!